जीवन शैली – Page 73 – दाङ खबर
May132018 by DangkhabarNo Comments
पति पत्नीको यस्तो तालमेलले हुनसक्छ आर्थिक समृद्धि
के भनाई छ भने, अक्सर दम्पतीको कलह आर्थिक कारणले हुन्छ । जब घरखर्च र कमाईको अनुपात मिल्दैन । अर्थात, जब कमाई भन्दा खर्च बढी हुन्छ, तब पारिवारिक कलह सुरु हुन्छ । पुग्दो आयस्रोत एवं पैसा छ भने परिवारका इच्छा, चाहना र आवश्यक्ताहरु त्यही अनुरुप पुरा हुन्छ । उनीहरुमा आर्थिक कारणले कुनै समस्या आउँदैन । तर, आयस्रोतका माध्याम कम हुँदै जानु, आर्थिक भार थपिदै जानु भनेको कलहको निहुँ बन्छ । आर्थिक अभावले पारिवारिक विखण्डन ल्याउँछ । दम्पतीबीच मनमुटाव, झैझगडा मात्र होइन, सम्बन्ध नै दुई चिरा पर्ने अवस्था पनि आउँछ । आफ्नो सामान्य आवश्यक्ताहरु सजिलै पुरा नहुँदा, इच्छाहरु खुम्च्याएर बस्नुपर्दा परिवारमा सुख आउँदैन । पतिपत्नीबीच एकअर्काले गर्ने खर्च पनि कलहको विषय बन्छ । त्यसैले परिवार सुखको एउटा माध्यम हो, दिगो आयस्रोत । भनौं, पुग्दो पैसा छ भने परिवारमा आर्थिक कारणले कलह हुँदैन । सामान्य आवश्यक्ताहरु
May122018 by DangkhabarNo Comments
उपत्यकाभित्रै तरकारीको फरक फरक मूल्य
काठमाडौँ, फागुन २९- काठमाडौं उपत्यकाभित्रै रहेका तरकारी बजारमा तरकारीको मूल्य फरक फरक पाइएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार र अन्य तरकारी बजारमा अनुगमन गर्दा एउटै तरकारीको मूल्य पनि फरक फरक पाइएको हो । तरकारी व्यवसायीहरूले तरकारीको मूल्य निर्धारणमा मनोमानी गर्दा आपसमा जोडिएर रहेका पसलमै समेत तरकारीको मूल्य फरक फरक हुने गरेको छ । कालीमाटी तरकारी बजारमा हरियो खुर्सानीको खुद्रा मूल्य ४८ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ । तर, त्यही खुर्सानी मैतीदेवीमा ७० रुपैयाँ र कुपण्डोलमा ६० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भइरहेको पाइयो । त्यस्तै, कालीमाटीमा खुद्रा मूल्य ३८ रुपैयाँ प्रतिकिलोेका दरले रहेको ठूलो गोलभेंडा कुपुण्डोलमा ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो र मैतीदेवीमा ४० रुपैयाँ प्रतिकिलोेका दरले बिक्री भइरहेको थियो । कालीमाटी तरकारी बजारमा प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँका दरले रहेको भन्टा कुपुण्डोलमा उपभोक्ताले ७० रुपैयाँमा खरि
आज – २९ बैशाख २०७५ शनिवारको राशिफल
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) विचार गरेर निर्णय लिनु उचित होला । गरेको काममा ढिलासुस्ती हुनेछ । पारिवारिक समस्या आइपर्ला । खर्चिलो यात्रा रहला । मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा) इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछन् । धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । ठुला व्यक्तिले तपाईँका मेहनतको प्रसंसा गर्नेछन् । सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) झुटा आरोप आईपर्दा समस्या खेप्नुपर्नेछ । अनावश्यक धन खर्च हुँदा मानसिक चिन्ता वढ्नेछ । स्वास्थ्य तथा सौन्दर्यतामा धन खर्च हुनेछ । तुला (रा, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) स्वादिष्ट भोजन पाईनेछ । मनमा हर्ष,उमङ्ग र उत्साह छाउनेछ । जीवनसाथीको सल्लाहमा गरिएको कार्यमा अधिक सफलता मिल्नेछ । धनु (ये, यो, भा, भि, भु, धा, फा, ढा, भे) कार्यहरू अधुरै रहला । प्रेममा मनमुटाव आउला । प्रतिकूल समयले घेरेको छ, संयम रहनु होला । बोलीको विपरी
गर्मीमा कसरी जोगाउने छाला र कपालको सौन्दर्य ?
गर्मीमा चर्को घाम र धुलो-धूँवाले अनुहार तथा हातखुट्टाको छालालाई सोझो असर गर्छ । घामले छालालाई कालो बनाउँछ । छालाको पानी सोस्छ र रुखो बनाउँछ । छाला फुस्रो हुने, रुखो हुने समस्या हुन्छ । मध्यन्हको चर्को घाममा घरबाहिर हिँड्ने अझ मोटरसाइकल, स्कुटरमा कुद्नेहरुले अनुहारको सुरक्षा खोज्नुपर्छ । मोटरसाइकल एवं स्कुटरमा धुलो, धूँवाले अझ बढी असर गर्छ । जसरी अनुहारलाई घाम, धुलो, धूँवाले क्षति पुर्‍याउँछ, त्यसैगरी कपाललाई पनि असर गर्छ । त्यसैले गर्मीमा अनुहार तथा कपालको सौन्दर्य कायम राख्न केही उपाय अपनाउनुपर्छ । के हुन्छ समस्या ? घामको सोझो असरले अनुहार रुखो हुने समस्या देखापर्छ । भनिन्छ, मध्यन्हको चर्को घामले छालालाई स्वभाविकभन्दा बुढो बनाइदिन्छ । त्यसैले यतिबेला चर्को घाममा निस्कनु त्यती राम्रो मानिदैन । त्यस्तै छाला डढ्ने, चायाँपोतो आउने, डन्डिफोर आउने, फुस्रो हुने समस्या देखापर्छ । न
यस्ता छन् आँखामुनि कालो धब्बा देखिनुका कारण
एजेन्सी, कतिपयको आँखाको तल्लो भागमा कालो धब्बा र घेरा बस्छ । ‘कालो धब्बा आफैमा छालाको रंग होइन, बरु रगत र पानीको प्रवाहको कम हो,’ छाला विज्ञ जस्टिन हेक्सटल भन्छिन् । दिनमा यस्ता धब्बा अझै स्पष्ट देखिन्छ । सुख्खा हुँदा यस्तो धब्बा झनै देखिन्छ । ‘जब तपाईको शरिर सुख्खा हुन्छ वा शरिरमा पानीको मात्रा न्यून हुन्छ छालाको आधारभूत पत्र अर्थात् डर्मिसमा रगत र पानीको प्रवाह न्यून हुन्छ । अनि भित्री छाला प्रष्ट रुपमा कालो देखिन्छ’, उनी भन्छिन् । तपाईँले अघिल्लो रात सुख्खा खानेकुरा खानुभएको छ वा पानी कम पिउनुभएको छ भने पनि भोलिपल्ट बिहान आँखाको तल्लो भागमा घेरा पर्नेदेखि कालो धब्बासम्म हुन्छ । अझ साँझ पख कफी खानुभएको छ भने त यसको स्ष्ट असर भोलि बिहान आँखामा देख्नुहुन्छ । कफीले आँखाको नरम छालाको पानी विस्तारै सोसिदिन्छ र छाला कालो हुन्छ । यदि तपाईँ एसी वा ताप दिने कोठामा हुनुहुन्छ भने त यसको असर स
दाँत सुन्दर मात्र होइन, स्वास्थ्य पनि हुनुपर्छ
दाँत, शरीरको यो हिस्सा बहुउपयोगी छ । दाँतको सम्बन्ध मूलत, दुई कुरासँग छ । एक स्वास्थ्य, दोस्रो सौन्दर्य । पहिलो कुरा, दाँतको मूख्य काम खानेकुरा चपाउनु हो । यसर्थ दाँतको सम्बन्ध सम्पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्यसँग पनि छ । किनभने जब दाँतले राम्ररी चपाएर खाइन्छ, तब पाचन प्रक्रिया सहज रुपले हुन्छ । भनिन्छ, खानेकुरा राम्ररी चपाएर खानुपर्छ । राम्ररी चपाएर खानेकुरा सेवन गर्दा त्यसमा रहेको पोषक तत्व शरीरले सहज रुपमा ग्रहण गर्छ । पाचन यन्त्रलाई अनावश्यक भार पर्दैन । यसरी खानेकुरालाई टुक्रा-टुक्रा गर्नका लागि बलियो दाँत चाहिन्छ । बलियो दाँत मात्र भएर पनि पुग्दैन, सफा र स्वस्थ्य पनि हुनुपर्छ । किनभने दाँत फोहोर भयो भने हामीले जे-जति खानेकुरा खान्छौं, त्यो सबै दुषित हुन्छ । मुखमा खानेकुरा चपाउन थालेपछि त्यो सफा हुनुपर्छ । यसका लागि मुख तथा दाँत पनि सफा हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा, कवि, कलाकारले सौन्दर्य